We.com.mm - မော်လမြိုင် အချဉ်လေးနဲ့ပဲပြားကြော် ပူပူလေးလုပ်စားမယ်
မော်လမြိုင် အချဉ်လေးနဲ့ပဲပြားကြော် ပူပူလေးလုပ်စားမယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ we မှအစားတစ်လိုင်း ချစ်သူတွေ အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ပဲပြားကြော်လေးကို အရသာရှိတဲ့ မော်လမြိုင်အချဉ်လေးနဲ့ တွဲစားနည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
မော်လမြိုင်အချဉ်ကတော့ မန်ကျည်းလေးနဲ့ ဖျော်တာပါပဲ။ ထူးခြားတာကတော့ ပဲမှုန့် ထည့်ပြီး ဖျော်တာပါ။ ဒါကတော့ တကယ်ကို စားလို့ကောင်းတဲ့ အရသာလေးပါပဲနော်။ ဒီတော့ အချဉ်ဖျော်နည်းလေးနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း လုပ်နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ငရုပ်သီးစိမ်း အတောင့်ကြီး (၃တောင့်)
၂. ထန်းလျှက် (၂တုံး)
၃. ကြက်သွန်ဖြူ (၂ မြွှာ)
၄. မန်ကျည်းရည်ဖျော်ပြီးသား (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း)
၅. သကြား (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)
၆. ဆား (အနည်းငယ်)
၇. ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့် (အနည်းငယ်)
၈. ပဲမှုန့် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)
၉. ပဲပြား ( ၁ တုံး )
၁၀. ရှာလကာရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း )
၁. ပဲပြားကို အတုံးလေးတွေ တုံးထားပြီး ဆားနဲ့နယ်ကာ ဆီပူအိုးထဲမှာ ကြော်ထားပါ။
၂. ရှာလကာရည်၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ထန်းလျှက်၊ မန်ကျည်းရည်တို့ကို ကြိတ်စက်ထဲထည့်ကြိတ်ပါ။
၃. ရရှိလာတဲ့ မန်ကျည်းရည်အနှစ်ကို မီးပူပေါ်မှာ ကြိုထားပါ။ ထို့နောက် ရေ အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ပြီးသွားရင် သကြား၊ ဆား၊ ထည့်ပြီး ဆူပွက်သည်အထိ ကြိုပါ။ အနည်းငယ် ပျစ်လာရင် အိုးပေါ်ကချပြီး စားခါနီးမှ ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့်နဲ့ပဲမှုန့် ထည့်ပြီး ပဲပြားနဲ့ တို့စားပါ။ ဒါဆိုစားလို့တကယ်ကောင်းတယ်နော်။ ပဲပြားအပြင် အခြားမိမိနှစ်သက်ရာ ရုံးပတေသီး၊ အသားတုတို့ ကိုလည်းကြော်စားလို့ရပါတယ်။
ပန်းသီးကိုအရသာတစ်မျိုးနဲ့စားချင်သူများအတွက် အရသာရှိတဲ့ Cinnamon Apples ပြုလုပ်နည်း
မိုးအေးအေးနဲ့ လိုက်ဖက်လှတဲ့ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်
စားတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အာနိသင်ပြောင်းတဲ့ အစားအစာ(၆)မျိုး။